Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tanzania » Miakatra amin'ny Tendrombohitra Kilimanjaro miaraka amin'ny Hafatry ny fanantenana
Travel Travel • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny
Enimpolo taona lasa izay, ny manamboninahitry ny tafika tanzaniana teo aloha, ny Tara Alexander Nyirenda, dia nianika ny Tendrombohitra Kilimanjaro ary avy eo nanangana ilay "Freedom Torch" malaza an'i Tanzania teo an-tampon'ny tampon-dranomandry mba hampisy ny fandriam-pahalemana, ny fitiavana ary ny fanajana ny vahoaka Afrikana.
Hetsika toy izany koa no karakaraina mba hisarihana ny olona manerana an'i Tanzania, Afrika, ary ny sisa eran'izao tontolo izao.
Ity hetsika ity dia ny hitsangatsangana ary avy eo handresy ny tampon-tampon-kavoakan'ny Tendrombohitra Kilimanjaro amin'ny voalohan'ny volana Desambra amin'ity taona ity - 2021.
Hifanindran-dàlana amin'ny fanamarihana ny faha-60 taonan'ny fahaleovan-tenan'i Tanzania tamin'ny fomba iray izay nanisy fiovana.
Mpihanika izany amin'ity indray mitoraka ity dia handefa hafatra fanantenana avy amin'ny "Tafon'ny Africa" ​​fa Tanzania sy firenena afrikanina hafa dia azo antoka kokoa amin'ny fivezivezena amin'izao fotoana izao rehefa misy vaksinin'ny COVID-19 saika manerana ny kaontinanta.
Rehefa nandrehitra ilay "Torch Freedom" malaza teo amin'ny tampon'ny Mount Kilimanjaro 60 taona lasa izay, midika ara-panoharana ny hamirapiratra amin'ny sisin-tany ary avy eo hitondra fanantenana ho an'i Afrika iray manontolo izay misy famoizam-po, fitiavana misy fifandrafiana, ary fanajana izay misy fankahalana.
Fa amin'ity taona ity, ny mpihanika tendrombohitra ho any an-tampon'ny Tendrombohitra Kilimanjaro dia handefa hafatra fanantenana fa toerana azo antoka ho an'ireo mpitsidika i Tanzania ary koa i Afrika izao dia azo antoka ho an'ny dia rehefa avy nandray fepetra isan-karazany ny governemanta marobe amin'ity kaontinanta ity. .
Ny fanentanana mba hisarihana ny olona avy amin'ny faritra samy hafa any Afrika sy izao tontolo izao handresy an'io tampon'ny Afrika indrindra dia ampahany amin'ny fankalazana nanamarihana ny faha-60 taonan'ny fahaleovan-tenan'i Tanzania tamin'ny 9 Desambra tamin'ity taona ity, satria mipoitra tsikelikely izao tontolo izao avy amin'ny fiantraikan'ny Valan'aretina covid19.
Tanzania National Parks, mpiambina ny fiarovana ny Mountain Kilimanjaro, dia miara-miasa amin'ireo orinasam-pizahan-tany hafa mba hisarihana ny olona hankalaza ny 60 taona an'i Tanzania ao amin'ny Tafon'ny Africa.
Efa misy ny fepetra fiarovana, ary mivory miaraka amin'ireo olon-tiany any amin'ireo toerana tsy manam-paharoa irian'ny fanahiny hifandray ireo mpandeha.
Voasaron'ny zavona mandritra ny andro, ny Tendrombohitra Kilimanjaro, tampon'ny havoana avo indrindra any Afrika, dia toerana fialan-tsasatry ny fizahan-tany tanzanianina iray, izay mahasarika mpihanika manodidina ny 60,000 isan-taona.
Ny sary dia maneho endrika iray manerantany ho an'i Afrika, ary ny kavina simetrika rakotra lanezy dia mitovy dika amin'i Afrika.
Eo amin'ny sehatra iraisampirenena, ny fanamby amin'ny fahalalana momba, ny fizahana ary ny fiakarana an'io tendrombohitra miafina io dia naka sary an-tsaina ny olona erak'izao tontolo izao. Ho an'ny maro, ny fahafahana miakatra an'ity tendrombohitra ity dia fitsangatsanganana mandritra ny androm-piainany.
Tamin'ny 1961, ny sainan'i Tanzania vao nahaleo tena dia nakarina ho any an-tendrombohitra mba hanidina amin'ny tampon-tampony fotsy. Ny jiro fahalalahana dia narehitra teny an-tampony ihany koa mba handrisihana ny fanentanana ho amin'ny firaisankina, fahalalahana ary firahalahiana.
Mount Kilimanjaro dia mijanona ho marika sy reharehan'i Afrika Atsinanana amin'ny lazan'ny fizahan-tany azy. Ity tendrombohitra avo indrindra afrikanina ity dia voatanisa ao amin'ny toeran'ireo fizahan-tany 28 manerantany mendrika ny hanao traikefa nahafinaritra.
Ireo mpitsidika izay tsy afaka miakatra amin'ny tendrony dia mety mankafy mijery ny hakantony voajanahary avy amin'ireo tanàna ahafahan'izy ireo maka sary ity tendrombohitra monolithic ity.
Chris Lyle hoy:
September 16, 2021 ao amin'ny 01: 34
Misaotra noho ilay lahatsoratra tsara, mamerina fahatsiarovana mahafinaritra. Izaho koa dia teo an-tampon'ny Kilimanjaro tamin'io Andro Fahaleovantena Tanganyikan tsy hay hadinoina io 60 taona lasa izay, rehefa avy niantsena nianatsimo avy tany an-tsekoly tao Nairobi aho. Rehefa niverina izahay dia tototry ny rano ny tetezana ao Namanga ary notsaboina izahay raha nahita an'i Jomo Kenyatta nitazona ireo taolam-paty ho famindrana avy amin'ny fiara amin'ny lafiny Tanganyikan mankany amin'ny iray amin'ny lafiny Kenyan. Rehefa nilatsaka ny rano ny ampitson'io dia afaka niampita ny renirano izahay. Faly aho mizara fampahatsiahivana bebe kokoa raha misy ny liana.